The 6 mfe nkọwa Iji Njọ na The naa, na ọ bụ akaha-akwa ụta na wụnye ha! - Viga foset Manufacturer
Home blog The 6 Mfe nkọwa Iji Njọ na The naa, na ọ bụ akaha-akwa ụta na wụnye ha!
The 6 Mfe nkọwa Iji Njọ na The naa, na ọ bụ akaha-akwa ụta na wụnye ha!
Datebọchị ： 2020-10-27 Categories ：blog Nlele ： 29
Enwere ọtụtụ nkọwa dị na ime ụlọ ịwụ ahụ, ma ọ bụrụ na ị payaghị ntị na ha, ị ga-akwa ụta ma emesịa. Karịsịa mmiri na-adịghị, mkpọda na ala mmiri, nsogbu ndị a bụ isi nsogbu atọ kachasị nke ime ụlọ ịwụ ahụ, nke njikọ nsogbu na-eweta nsogbu.
Taa, anyị ga-agwa gị, ihe ekwesiri ị attentiona ntị na mma ụlọ ịsa ahụ.
Agaghị echekwa ule mmiri mechiri emechi.
Ọtụtụ mmadụ ga-echefu ịme ule mmiri mechiri emechi mgbe mmiri gwụchara, ma ọ bụ chekwaa ya ma ọ bụrụ na ọ bụ oke nsogbu na ha na-echegbu onwe ha na ndị agbata obi ha nke ala agaghị arụkọ ọrụ, wdg, mana m na-agwa gị, emela zoputa ya!
Nnwale mmiri mechiri emechi bụ nzọụkwụ ikpeazụ na mgbochi mmiri, ma ịghara ime ya bụ ịtụfu mgbalị gị niile na ịtụfu mgbalị ahụ! N’etinyeghi mmiri mechiri emechi, ọ bụkarịrị nsogbu karịa mgbe mmiri na-arịdata n’ala n’ụlọ onye agbata obi gị.
Kedu ule mmiri mechiri emechi?
Ọ bụ ụzọ nnabata ụlọ mgbe mgbochi mmiri, akpọkwara ule nchekwa mmiri.
Mgbe anyị jupụtara na nchekwa mmiri 24 ~ 48 awa iji hụ, ọ bụrụ na ị chọpụta na ọkwa mmiri ahụ na-ada, ma ọ bụ na-agbada mmiri seepage, anyị ga-akwụsị ozugbo nchekwa mmiri ahụ, waterproof oyi akwa ọzọ, wee re-mechie emechi mmiri ule.
Ekwesịrị m ịme ule mmiri mechiri emechi n'ụlọ mkpuchi siri ike?
Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị na-emepe emepe emeela mmiri na nyocha, àgwà nke ihe owuwu na ihe ndị eji eme ihe amaghị, yabụ ịnọ n'akụkụ nchebe, mee nyocha mmiri mechiri emechi!
Ka nsogbu ghara ịla n'iyi n'ọdịnihu, wee chọta ndị nrụpụta agọnahụkwa.
Kedu ka esi eme ule mmiri mechiri emechi?
Mee n'ozuzu ya okpukpu abụọ mgbe akọrọ, n'ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ na ciment ciment gburugburu centimita ise nke mmiri na-egbochi, wee gbapụ n'ala, ịdị elu nke 3-5 cm, oge mmiri adịghị mma karịa, oge maka awa 24 ruo 48 kacha mma.
Ime mmiri mechiri emechi iji tinye uche na isi?
1, ị ga-echere akpa mmiri mmiri kpamkpam akọrọ, tee agba nke abụọ na-egbochi mmiri!
2, Mee ngwa ngwa na mgbochi mmiri, nwee ndidi mgbe ị na-eme nyocha mmiri, emela ohere, ma ọ bụ ị ga-enwekwu nsogbu na nkwụsị mgbe e mesịrị.
A ga-eme mkpọtụ ala.
E meghị ọpụpụ ala ụlọ nke ọma, otu ga-ewe iwe, nke ọzọ agaghị enwe ike ịdata mmiri ahụ, ụlọ ahụ jupụtara na mmiri.
Number nke ala uzo:
Athlọ ịsa ahụ na-agba mmiri, ọkacha mma ma ọ dịkarịa ala abụọ: otu na ịsa ahụ na otu na mpaghara akọrọ na-abụghị ebe ịsa ahụ.
Na-agbagharị gburugburu mpaghara a nke ala mmiri:
Diagonal bee pavement: dị ka aha ahụ na-egosi, ọbụlagodi na nduzi nke ịkpụ diagonal, ọnọdụ nke ala drainage dị n'etiti etiti taịl nile.
Anọ kwadoro ịkpụcha: nke a na-ahụkarị bụkwa ụzọ kachasị dị irè nke paving, ala mmiri dị ka etiti, nke a na-agbanye gburugburu taịlị ndị dị na trapezoid, na-agbada n'ime iji mepụta mkpọda.
-Dị ụdị uhie: akụkụ anọ nke ala drainage na-kwekọọ na tile n'ọnụ, n'akụkụ n'akụkụ taịl nile na-etolite etiti nke obe, usoro paving a bụ ihe kwesịrị ekwesị maka square ala drainage.
Etinyeghi Idebe ala igbapu mmiri na uzo nke taịl nile anọ nwere ike ịchekwa usoro ịcha, ma dịkwa oke mma.
Ihe ole na ole ị ga-ahụ mgbe ị na-eme ala ala:
1, Họrọ a kwesịrị ekwesị paving usoro dị ka gị n'ezie ọnọdụ, n'agbanyeghị ihe ụdị paving ụzọ dị mma, ihe kacha mkpa bụ iji jide n'aka na ala igbapu bụ na nke kachasị dị na mkpọda, iji hụ na mmiri nwere ike ịba n'ime.
2, ebe igbapu mmiri kwesịkwara imewe tupu oge eruo, na-ekwu okwu n'ozuzu, a ga-etinye mmiri ịsa ahụ na nkuku nke ọnọdụ ahụ, nke mere na mkpọda ga-aka mma ime. Ọ bụrụ n’itinye ya n’etiti, ọ chọrọ mmiri ka o si na gburugburu na-aga, bụ nke na - eweta nsogbu.
3, - zụta ezigbo ala mmiri tupu ịmalite, ma ọ bụghị ya, ndị ọrụ ahụ amaghị etu oghere ahụ ga-esi debe ya mgbe ọ na-ezipụ taịl nile, họpụta ụzọ ide ala dị mma, ị nwere ike izere nsogbu nke idobere oghere wee zụta nha nke ala mmiri ezighi ezi.
Lezie anya banyere mkpọda nke mwepụta ahụ.
Mkpọda a kpọtụrụ aha n’elu na-ezo aka ná mkpọda nke drain n’ogwe ime ụlọ ịwụ ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ịsa ahụ gị mmiri na-ejupụta na mmiri mgbe niile, mmiri enweghị ike ị gafere mmiri ahụ. mkpọda nke drain ahụ abụghị nke ọma.
N'ezie, ezigbo nna ukwu ga-enye gị ezigbo mkpọda, ọ bụrụ na ị zute ndị na-enweghị ntụkwasị obi.
Iji lezie anya, m ga-akuziri gị usoro nnwale dị mfe, mgbe ị mụsịrị taịl ahụ, ị ​​nwere ike wụsara ya mmiri wee hụ ma ọ bụrụ na mmiri ọ bụla na-asọ oyi ka obere oge gachara, ị ga-ama ma mkpọda nke ime ụlọ ịwụ ahụ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ihe edeturu n'okpuru mkpọda nke mmiri:
1, mkpọpu mmiri nke mmiri ịsa ahụ na ime ụlọ ịwụ ahụ ime ebe dị iche iche, ọ bụrụ na ị tinye ebe ịsa ahụ niile na ime ụlọ ịsa ahụ niile na mkpọda mmiri ahụ, mgbe ahụ ọdịnihu dịkwa mfe iji mepụta nsogbu mmiri.
2, ahọrọla nnukwu brik, ime ụlọ ịwụ ga-ebe wetara bụghị nnukwu, a ole na ole iberibe brik na pavụ, bad do mkpọda. Brik dị obere, mee mgbe mkpọda ga-adị mma ịrụ ọrụ nke ukwuu, họta 30cm ~ 10cm ma ọ bụ brik dabara adaba.
Echekwala taịlị ime ụlọ ịwụ ahụ Beaux Arts.
Ụlọ ịsa ahụ taịl nile, ọ na-ka na-atụ aro ka ime mma seams.
Lọ ịsa ahụ ahụ anọwo na ebe dị jụụ ruo ogologo oge, ndị nkịtị na-eme onwe ya ka ọ bụrụ ciment ọcha, nke na-adịghị egbochi mmiri ma ọ bụghị na-eguzogide unyi, na mgbe ogologo oge, mmiri nwere ike ịfefe ngwa ngwa na mgbawa tile ma gbanwee nwa na ebu.
E jiri ya tụnyere caulk ọdịnala, caulk bụ ihe siri ike, na-adịkarịghị mfe ịkụcha, enwere ike iji ya ogologo oge, na ịlele ka mma, uru dị elu dị mma karịa ọnọdụ!
Achọkwala efere ịsa ahị n’elu tebụl a kwụsiri ike.
E nwere ọtụtụ ụdị nke tebụl basin countertop, ma ọ dị mma ile anya nke ọma, mana enwere ego ịkwụ ụgwọ maka ihe ndị mara mma.
Ọ bụrụ na ị dị umengwụ, ahọrọla bezin a na-akụ n’elu, ndị nkịtị, ma ọ bụ ịbụ ihe bara uru!
Ime ụlọ ịwụ ahụ adịworị mmiri mmiri ma na-adaba na mmiri na-ada, oghere dị n'akụkụ ite ahụ na ebe a na-agba mmiri, ọ dịkwa mfe ịgbanwuo oji ojii, hichaa ọtụtụ nsogbu.
Na mgbe ị na-asa ihu gị ma na-asa ezé gị, a na-enweghị ike ihichapụ mmiri mmiri na mmiri dị ka ọdọ mmiri. Enwere ọtụtụ bezin mara mma ma mara mma nke ukwuu, ma enwere ndị kwesịrị ekwesị ịhọrọ site na mgbe ahụ!
Njikwa odor kwesiri ime.
Na agbanyeghị na ịhọtara ite mmiri ma ọ bụ bezin dị n'okpuru, ị ga-echeta iji mee akwa Nchekwa mmiri S-yiri gbagọrọ agbagọ iji gbochie ísì na ụmụ ahụhụ ịbanye na drain.
Ejikọtara njikọ ahụ nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ na-abịa na mgbochi-isi isi ngwaọrụ bụ ihe kasị mma.
Mee nkọwa ndị a dị n'elu 6 nke ọma, iji hụ na ị na-ebiwanye ka ị na-enwekwu afọ ojuju na ime ụlọ ịwụ ahụ n'ụlọ.
Mbụ: Smart mposi, Rock slab Bath Cabinet Mkpokọta "On The New"! Ngwaahịa ndị a emeela na ihe ngosi na nso nso a…
Next: [Akwụkwọ akụkọ nke oge a] TOTO na-agbakwunye $ 100 Nde iji wuo Ebe Mmepụta nke Atọ Na Vietnam